Sawirro: Haweeney xil sare ka heysa Milatariga Soomaaliya oo qarax lagu dhaawacay. | XAL DOON
Home NEWS Sawirro: Haweeney xil sare ka heysa Milatariga Soomaaliya oo qarax lagu dhaawacay.
Sawirro: Haweeney xil sare ka heysa Milatariga Soomaaliya oo qarax lagu dhaawacay.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xooggan oo saaka ka dhacay degmada Hodan ee bartamaha magaalada Muqdisho, kaasoo jugtiisa si weyn looga maqlay Caasimadda.
Qaraxa oo ahaa Miino wadada dhineceeda la dhigay, ayaa lala eegtay gaari Cabdi Bile ah oo ay wadatay Haweeney kamid ah Saraakiisha Ciidamada Milatariga, iyadoo ku sii jeeday dhismaha xarunta Wasaarada Gaashaandhiga ee degmada Deyniile.
Si rasmi ah waxa uu qaraxa uga dhacay afaafka hore ee Carwadii hore ee Qaranka, waana meel Lix sano kahor u ka dhacay qarax ay ku naf waayeen Haween badan oo ka shaqeynayay arrimaha Nadaafada ee wadooyinka.
Sida aynu wararka ku helnay qaraxa saaka waxaa ku dhaawacantay Agaasimaha Isbitaalka Xoogga dalka Khadiijo Iimaan Ceynte iyo Darawalkeeda oo lagu magacaabo Aadan Yare, iyadoo la sheegay ineysan jirin askar kale oo gaariga la saarneyd.
Dhaawacyada labadan shaqsi ayaa la geeyay mid kamid ah Isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho, halkaasoo lagula tacaalayo xaaladohooda Caafimaad, waxaana qaraxyada noocan oo kale ah ee Miinada looga bartay Kooxda Al-Shabaab.